၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အမျိုးသမီးများသည်အဘယ်အရာကိုအောင်ပွဲခံမည်နည်း။ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ဒီဆောင်းပါးမှာငါတို့ပြောမယ် အမျိုးသားများ၏အသွင်အပြင် အဲဒီအချိန်ကအမျိုးသမီးတွေကြားမှာအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကိုလည်းမင်းတို့ပေးမှာပါ timeless အကြံပြုချက်များs, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ဖို့ရန်သူတို့ကိုသင်အပေါ်ကောင်းသောစှဲစေရန်နှင့်သင်ဆွဲဆောင်မှုကြည့်ရှုရန်ကူညီပေးသည်သောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ။ ထို့အပြင်နောက်ဆုံးအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းညွှန်ချက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးလိမ့်မည် imagen ကြောင်းချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ထုတ်လွှင့်သင့်ပါတယ်။
1 ပထမ ဦး ဆုံးအကွံဉာဏျကိုယ့်ကိုကိုယ်မှစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်
3 လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်း၏အားသာချက်ကိုယူပြီး 90 ၏ဖက်ရှင်
ပထမ ဦး ဆုံးအကွံဉာဏျကိုယ့်ကိုကိုယ်မှစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်
ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်မှာအကောင်းဆုံးမှာသင်ကိုယ်တိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ မရပ်တည်ရန်ဖြစ်သည် ငါတို့ဘယ်လိုဝတ်စားလဲ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှု, နှင့်သင်သည်နောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းသစ်ကိုသွားခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ထိုခံစားချက်ပေးရရှောင်ရှားရန်ရှိသည် မင်းအဝတ်လဲနေတယ် သင်နှင့်အတူအဆင်ပြေမဟုတ်သောအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူသို့မဟုတ်သင်မဖြစ်နိုင်ပါ သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်အရသိရသည်.
ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုသည်မှာသင်သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဂရုစိုက်ရန်ဖြစ်သည်၊ အမျိုးသမီးများသည်ဂရုပြုကြသည်သို့မဟုတ်လျှင်မဟုတ်ပါက၎င်းတို့ကိုရည်ရွယ်သည့်beautyရာမလှပသောအလှအပနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစက်မှုလုပ်ငန်းရှိသည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ထင်သနည်း။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့ထင်သောအရာများကိုကိုင်တွယ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်ဆောင်းပါးများသည်အသေးအဖွဲမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုမဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့်အစားပုံမှန်ပုံမှန်ယူပြီး၏ဥပမာတစ်ခုပေးရန် ခွေအိတျတို သငျသညျဖို့ဝံ့အနက်ရောင်လူမည်း အနည်းငယ်တီထွင်သင်၏စတိုင်မပျက်ဘဲအမြဲတမ်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုအသေးစိတ်ဖြင့်သေချာအောင်သင်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ကို၎င်းတို့ကိုပုံသေတပ်ဆင်ထားသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်သည်။
လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်း၏အားသာချက်ကိုယူပြီး 90 ၏ဖက်ရှင်
ယေဘူယျအားဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်စိတ်ကူးယဉ်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟုဆိုနိုင်ကြောင်းသတိရပါ။ ဒါဆိုဒီဥပမာမှာဆိုလျှင် 2020 ရှိတယ် 90 ပြန်လည်ရှင်သန်ဒါဟာကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ် သင့်ရဲ့ဗီရိုထဲထည့်ပါ မည်သည့် နောက်တဖန်တစ် ဦး လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လာသည်သောအဝတ်အစားပုံနှိပ်ရသောတီရှပ်များ၊ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကြိုက်နှစ်သက်သလောက်, သင်ကသူတို့ဝတ်ထားခြင်းအဆင်ပြေခံစားရနှင့်သူတို့သည်သင်၏ကိုက်ညီ ပုဂ္ဂိုလ် y ကိုယ်ပိုင်စတိုင်.
ဒါပေမယ့်တစ်ခုရှိလျှင် လုံခြုံစွာလောင်းကစား ဒါကသောစိတ်ကူးယဉ်ကိုကြောက်ခြင်းမရှိဘဲသင်လုပ်နိုင်သည် ဝတ်စုံကိုတစ် ဦး ချုပ်အားဖြင့်တိုင်းတာရန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏စံနမူနာယူထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာလူတိုင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာပဲ။ အိုကေတော့ပိုက်ဆံကုန်ကျတယ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများ၊ နှစ်သစ်ကူးအကြိုများစသည်ဖြင့်ကျင်းပမည့်ပါတီအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မည်။
သူတို့နှင့်အတူဖြစ်ပျက်သည့်အရာနှင့်ဆန့်ကျင်။ များသောအားဖြင့်ဤပုံစံအမျိုးမျိုးပွဲနေ့များအတွက်ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းကိုအသုံးမပြုသူများ (ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီသည်လူမှုရေးကွန်ယက်များတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်ထက်နည်းနေလျှင်) သည်အမျိုးသားများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအတားအဆီးမရှိပါ။ ထပ်တလဲလဲဝတ်စုံကို နှင့်သာဆက်သွယ်မှုနှင့်ဘာမှလျှင်ရှပ်အင်္ကျီကွဲပြား။
ဒါ့အပြင်တစ် ဦး ဖွဲ့စည်းသည့်အခါ ဆွဲဆောင်မှုအဝတ်အစားဗီရိုနောက်ခံ အမျိုးသမီးများချစ်ကြသည့်ယောက်ျားခန္ဓာဗေဒ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသတိရသင့်သည် ယောက်ျားအများကြီးအရေးပါမှုကိုမပေးပါဘူးသူတို့ထဲကတစ်ခုဥပမာအားဖြစ်ပါတယ် လည်ပင်း။ ဒါကြောင့်များစွာသောအရာဖြစ်ကြ၏ hollywood သရုပ်ဆောင်တွေ သူတို့ရဲ့မြှင့်တင်ရေးဓါတ်ပုံတွေမှာသုံးတာပေါ့ t ကို စတိုင်တွေလိုပဲသူတို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြတယ် 'ဟင်'' ။
ထိုနည်းတူစွာပင်သင်၏ခံစားချက်ကိုထုတ်လွှင့်စေသောသင်ဝတ်ဆင်ထားသည့်ဝတ်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည် သင်၏အသွင်အပြင်ကိုဂရုစိုက်ပါဒါပေမဲ့ မင်းကိုမဖြတ်ဘဲနောက်ဆုံးတော့သူကသူတို့ကိုပုလ်ကိုထည့်လိုက်ပြီးလူတစ်ယောက်ကသူ့အသွင်အပြင်ကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ် သင်ဝတ်ဆင်သည့်အဝတ်အစားများ သင် ၀ တ်ဆင်ထားသည့်အရာအားလုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုခံစားရခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်း၊ လေ့လာကြည့်ရှု.
ထိုနည်းတူစွာ၊ အခါသမယတစ်ခုစီအတွက်မည်သို့ ၀ တ်စားဆင်ယင်ပုံကိုမည်သို့ခွဲခြားရမည်ကိုသိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဥပမာ အကယ်၍ သင်သည်စပိန်နိုင်ငံရှိအဆက်အသွယ်စာမျက်နှာအချို့ကိုအသုံးပြုပါကသင်တင်ပို့လိုက်သောသင်၏မျက်နှာသာအတွက်အချက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ကွဲပြားခြားနားသော profile များကို မင်းမှာရှိတယ် ကွဲပြားခြားနားတဲ့အခြေအနေတွေမှာတွေ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေကကွဲပြားတဲ့အခြေအနေတွေမှာမင်းရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကိုပြသဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူထွက်သွားသောအခါ၊ အထူးပွဲနေ့၊ အိမ်၌အနားယူရန်စသည်။
ကြွန်တော်တို့ကြွက်သားများရင်တောင်ကြွန်တော်တို့အကြံပြုပါသည် ရှင်းလင်းသောရင်ဘတ်ဓါတ်ပုံများကိုတတ်နိုင်သမျှကန့်သတ်ပါအဆိုပါ အရမ်းသိသာဆောက်ထားတဲ့ နှင့် selfies။ ပြသခြင်းနှင့်သဘာဝထက်ပိုပြီးစော်ကားခြင်းဆိုသည်မှာလမ်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ပရောပရည်လုပ်ရန်သေချာသည့်အရာများဖြစ်သည်။
ဤအကြံပေးချက်များသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သင့်အကြောင်းသင့်ကိုစီရင်ရန်ပထမဆုံးအကြိမ်သင်မြင်ရသည့်အရာဖြစ်သည်၊ သင်၏အသွင်အပြင်ဖြစ်သော၎င်းကိုသင်ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ အကောင်းတစ် ဦး အထင်အမြင်စေရန်အခွင့်အလမ်းကိုတက်သွားကြကုန်အံ့!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အမျိုးသမီးများသည်မည်သည့်အရာကမည်သည့်အရာကအောင်ပွဲခံသနည်း။
မိဘများအတွက်5လက်ဆောင်အကြံဥာဏ်များ